အ = အားနာလွန်းလို့ ….. အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့……..အလင်းဆက်ရဲ့အဖြစ်တွေ… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အ = အားနာလွန်းလို့ ….. အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့……..အလင်းဆက်ရဲ့အဖြစ်တွေ…
အ = အားနာလွန်းလို့ ….. အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့……..အလင်းဆက်ရဲ့အဖြစ်တွေ…
Posted by alinsett on Feb 24, 2013 in Creative Writing, Myanmar Gazette, Think Different | 34 comments
အလင်းဆက် စီးမျောခံစားခဲ့သောအက္ခရာများ အားနာလို့လိုက်လျောတာ. .မအ ဘူးလို့ထင်သလား ။ အ တာပေါ့ ။
ဟ = ဟန်ဆောင်တတ်သော အလင်းဆက်တို့သားအမိ
ဠ = ဠ လား… သူ …. မှားနေတယ်
အလိမ်အညာ ခံလိုက်တယ်ဆိုတာ….. အားနာမိလို့ပါ ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ အလင်းဆက်… အားနာတတ်ပါတယ် ။
နိမ့်ကျ နွမ်းပါးမှုတွေကို..မြင်ရတဲ့ အခါ….
ဒါမှမဟုတ်….. မကြည့်ရက် မမြင်ရက်လောက်အောင်….သနားစရာကောင်းတဲ့ မြင်ကွင်းတွေကိ်ု မြင်တွေ့ ရတဲ့ အခါ…..
ရှောင်လွှဲ..မသွားရက်ပဲ….ကိုယ့်တာဝန် မကင်းသလို..ခံစားရတတ်တဲ့ .. ..စိတ်လည်း..ကျွန်တော့်မှာ… မပျောက်သေးဘူး ထင်ပါရဲ့ ဗျာ..။
ကျွန်တော်…. ခဏခဏ အလိမ်အညာ ခံရပါတယ် ။
တချို့လိမ်ညာမှုတွေကို…. မသိ /နားမလည်လို့ …. အလ်ိမ် ခံလိုက်ရပြီးးးးး
တချို့လိမ်ညာမှုတွေကိုတော့…လိမ်နေပြီမှန်း…သိသိကြီးနဲ့ ကို….တမင်တကာ..အလ်ိမ်ခံလိုက်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ညံ့ဖျင်းလို့လိမ်မှန်းမသိ…အလ်ိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့….
ရှက်လို့ …စီကာစဉ်ကာ..ပြောမနေတော့ပါဘူး ။
လ်ိမ်နေမှန်း…သိသိကြီးနဲ့တမင် အလ်ိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ အဖြစ်ကလေးတွေကိုတော့……စကားစမြည် ပြောပြချင်ပါသေးတယ် ။
အခုတလောမှာ… လိမ်နည်း အသစ်ကလေးတွေ..သုံးပြီး…. ငွေ လိမ်တောင်းတဲ့ သူတွေ..နေရာ အနှံ့ မှာ… ပေါများလာပါတယ် ။
ဟိုတလောကတော့…. ခြေထောက်တစ်ဖက်ကို…သစ်သားပြားတစ်ခုနဲ့ ပူးချည်ပြီး…
ထိုင် လျက်သား….နဲ့ …တရွတ် ဆွဲ / ဖင်ရွှေ့ ဖင်ရွှေ့ သွားပြီး…လိုက်တောင်းနေသူတစ်ယောက်ကို…တွေ့ လိုက်ပါတယ် ။
သစ်သားပြားနဲ့…ပူုးးချည်ထားတဲ့သူ့ ခြေထောက်တစ်ဖက်က…. ကျိုးနေတာလည်း..မဟုတ် …
အနာရောဂါ တစ်ခုခု ဖြစ်နေတာလည်း..မဟုတ်…..
သူ့ ခြေထောက်…ရဲ့ ခြေဖျား / ခြေချောင်းကလေးတွေ..က….. လှုပ်နိုင်နေတာ တွေ့ ရတယ်လေ။ ဒါပေမယ့်….. သူ က.. အဲဒီ ခြေထောက်တစ်ဖက်
သုံး..စား မရတော့လို့ …တောင်းစားနေရတဲ့ ပုံစံ အပြည့် သရုပ်ဆောင်ထားတယ် ။ မြင်ရသူတိုင်း…. ( သေချာ စောင့်မကြည့်သူတိုင်း )
သနား ဂရုနာသက်လောက်စရာ ပုံစံပေါ့ ။ လက်နှစ်ဖက်ကို..အားပြု..ပြီး… ထိုင်လျက်သားနဲ့ ဖင်တရွတ်ဆွဲ..သွားပြနေတာလည်း..
ပင်ပန်းတကြီးပုံ မို့ .တော်ရုံတန်ရုံလူတွေ… စေတနာ စိတ်..ယိုဖိတ်ချင်စရာပါ ။
ကျွန်တော်ကတော့…သူ့ ခြေထောက်တွေ..အကောင်းကြီးမှန်း….( သေချာ စောင့်ကြည့်ထားလိုက်လို့ …) သ်ိနေပါပြီ ။ သူ….ညာနေပြီ ။
ဒါပေမယ့်…ကျွန်တော်… သူ့ခွက်ထဲ..ပိုက်ဆံ..ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
လိမ်နေ ညာနေမှန်း.သိလျက်နဲ့ ..ဘာလို့ပေးသလဲ..ဆိုတော့…..
သူ…အဲဒီလို.. ဒုက္ခိတ ပုံစံကို..အပြည့်အ၀ သရုပ်ဆောင်နေရတာကိုက…..
ကျွန်တော်တို့ ..ယုံလောက်အောင်… ပင်ပန်းကြီးစွာ.. ဟန်ဆောင်ပြနေရတာမို့လို့ …..
သူ တော်တော်ပင်ပန်းပါတယ် ။ သူ့ ပင်ပန်းကြီးစွာ သရုပ်ဆောင်ပြနေမှုကို…..
(ကျွန်တော် စာထိုင်ရေးနေကျ…စေတီတော်ကြီး ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ .ညနေ အချိန်တွေဆို တွေ့ ရမြင်ရလေ့ရှိတဲ့)
အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို မြေနီကုန်း ကားမှတ်တိုင်နားမှာ..တွေ့ လိုက်ရပါတယ် ။
(အဲဒီင်္ မိန်းမကို ကြည့်ရတာ… အိမ်ခြေရာခြေမရှိတဲ့စရိုက်ပျက်နေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ပုံစံ.ပါ ။)
မြေနီကုန်း မှတ်တိုင်နားမှာ.တွေ့ ရချိန်မှာတော့…… အဲဒီမ်ိန်းမက.. အကောင်းမဟုတ်တော့ပါဘူး ။
သူ့ တစ်ကိုယ်လုံးကို…. တွန့့် လိမ်..ကောက်ကွေး..ထားပြီး… လက်တွေ / ခြေတွေ../ ခေါင်းတွေ / ခါးတွေကိုပါ…
လိမ်..ကိုင်း…ထိုင် ပြီး…ပိုက်ဆံ တောင်းနေတာပါ ။ ကျွန်တော်..အံ့တစ်အံ့ သြတစ်သြ ဖြစ်သွားတာပေါ့ ။
လက်တွေနဲ့ …သူ့ ခေါင်းကို လိမ်ကောက် တိမ်းစောင်းထားပြီး.ခြေကိုပါ..ခွင်ထားတာတွေ့ တယ် ။ မြင်ဖူးသလိုလိုပဲ….
ဘယ်မှာမြင်ဖူးပါလိမ့်လို့ ..ကိုယ့်ဘာသာ ပြန် စဉ်းစားရင်း….. မနည်းသေချာ ကြည့်တော့မှ…. အယ်….ဘုရားမှာ..တွေ့ဖူးတဲ့ မိန်းမပါလား ။
မနေ့ကမှ အကောင်းကြီး….။ အခု..ဘယ့်နှယ် ထ..ဖြစ်ရတာလဲ….ပေါ့ ။ လူများ..မှားနေသေးသလား….
ဟေ့အေးးးးး မမှားပါဘူး ။ သေချာကြည့်တော့လည်း…. ဘုရား ပတ်ဝန်းကျင်မှာ… မြင်ဖူးတဲ့ ..အဲဒီ မိန်းမ အစစ်ပါပဲ ။
ကဲ…. သူ..လိမ်နေပြီ ။ သိတယ် ။
ဒါပေမယ့်…. ကျွန်တော်..သူ့ အရှေ့ က..ခွက်ထဲ..ကို. ပိုက်ဆံ ထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ ။ ဘယ်ရမလဲ….။ အလင်းဆက်ပဲ…။
ဒီလောက်…..ပီပီပြင်ပြင်ကြီးးး မသန်မစွမ်းယောင်…ဆောင်ပြနေနိုင်တာ…. အသိအမှတ်ပြုရမှာပေါ့ ။
အဲဒီလို…. အများက ယုံအောင်…ဟန်ဆောင်နေရတာ..သူ တော်တော်… ပင်ပန်းရှာမှာပဲ ။
မျက်နှာလွှဲ ခဲပစ်.. လုပ်ခဲ့ဖို့ရာက….
လမ်းစရိတ် မရှိတော့လို့ပါ…ဆိုပြီးးးးးး ကားဂိတ်တွေ./ ရထား.ဘူတာတွေနားမှာ..လိုက်တောင်းနေသူတွေလည်း…တွေ့ ရ..များလာလေရဲ့။
တကယ် လမ်းစရိတ် မရှိလို့ …. အိမ်ပြန်ဖို့ ..ကားခ တောင်းတယ်ဆိုလည်း…. တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ဆီက… ရပြီးရင်…
တော်တော့ပေါ့နော် ။ ဒါပေမယ့်…တစ်ယောက်ပြီး.တစ်ယောက်… / တစ်နေရာပြီး.တစ်နေရာ… တစ်နေ့လုံးလိုလိုကို..လိုက်တောင်းနေတာတွေလေ။
အဲဒီတော့.. အိမ်ပြန်ဖို့ကားခမရှိလို့ .ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်က လိမ်ညာမှု တစ်ခု ဖြစ်သွားပြီလေ..။ ဒါမျိုးကိုလည်း…
အမှတ်မရှိတဲ့ခပ်ညံ့ညံ့ အလက်ဆင်းက…ပေးနိုင်သလောက် ပေးမြဲပါ ။ တောင်းတဲ့ ပုံလေးတွေကလည်း…. နွမ်းပါးတဲ့ပုံ့စံလေးတွေ.ဆိုတော့ ။.
( သူတို့ .. ဘယ်လို လိမ်ညာပြီးပဲ..တောင်းတောင်း…. ကျွန်တော်ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံကို…. ဘာပဲ..လုပ်လုပ်… ကျွန်တော့် ကိစ္စ မဟုတ်တော့ဘူး ။
ကျွန်တော် ပေးလိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့ … သူတို့ ..တစ်နေရာရာမှာ… အသုံးချလို့ .. အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်…ကျွန်တော်..ပေးရကျိုးနပ်ပါတယ် လို့ …
ခံယူမိပါတယ် ။ )
ဘာလို့ … အဲဒီလို တောင်းကြသလဲ…။
ဆင်းရဲတဲ့ သူ တိုင်း… အကျင့်ပျက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ ဆင်းရဲတိုင်း..ရေသာခို အချောင်လိုက်ပြီး….
လိမ်ညာ စားသောက်ကြတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။
တချို့ က.. လူဆင်းရဲပေမယ့်.. စိတ်ဓါတ်နဲ့အကျင့်စရိုက် မဆင်းရဲအောင်နေပါတယ်
တချို့ ကတော့.. လူ ဆင်းရဲတာကို အကြောင်းပြပြီး… စိတ်ဓါတ်နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ ကိုပါ မွဲတဲ့ စာရင်း သွင်းပစ်တတ်တယ်လေ။
( တချို့ ကတော့.. လူချမ်းသာ နေပေမယ့်………………….. )
ဆင်းရဲမွဲတေမှု ကို.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ခံစားနေရဆဲမို့ …. ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ် ။ ဒါပေမယ့်…. ဆင်းရဲ မှုကို..အကြောင်း ပြုပြီး…
မရိုးသားစွာ သက်မွေး ၀မ်းကျောင်းတာတွေကိုတော့…. ကျွန်တော်.. သိပ်မကြိုက်ဘူး ။
အူမ မတောင့်လို့ ..သီလ မစောင့်ဘူး..ဆိုတဲ့စကားကိုလည်း.. ကျွန်တော်.. သိ သဘောမကျပါဘူး ။
အူမ တောင့်သည် ဖြစ်စေ… မတောင့်သည် ဖြစ်စေ..
သီလ ဆိုတာ စောင့်လေ ကောင်းလေ မဟုတ်လား ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…… လိမ်ညာ လှည့်စားပြီး ပိုက်ဆံတောင်းနေသူတွေကတော့…ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ နေရာ အနှံ့ မှာ…
ပေါများ…နေပါပြီ ။ အဲဒီလို ဟန်ဆောင် လိမ်ညာပြီးးး တောင်းစားနေသူတွေ ကင်းသွား အောင်….
( စကားလုံးကြီးကြီးကျယ်ကျယ် သုံးရရင်….လူဆင်းရဲမှု နဲ့အကျင့်စာရိတ္တ ဆင်းရဲမှု ပပျောက်အောင်… ) ကျွန်တော်.. လုပ်ချင်ပါတယ် ။
ခက်တာက… ကျွန်တော် ဘယ်လို… ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပေးရမှာလဲ….
ဘယ်လို… လုပ်မှ လူဆင်းရဲ မှု / အကျင့်စာရိတ္တ ဆင်းရဲမှုတွေ.. ကင်းစင်မှာလဲ…
ကျွန်တော့်လို ….. ဘာမဟုတ်တဲ့ချာတိတ်လေးတစ်ယောာက်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာလား…
တစ်ယောက်တည်း လိုက် ပြင်နေလို့ရော..ရပါ့မလား…။
မသေချာ မရေရာသေးတဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့အတွန့်တက် အတွေးတွေ / အတွန့် တက် ဆန္ဒတွေ ကို…. အသာ..ဖယ်ထားပြီးးးးးး
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်…. ပြင်ဆင်ရမယ့်… အချက်တစ်ချက် က ရှိနေပါတယ် ။
ဗမာ ပီပီ..အားနာတတ်တဲ့စ်ိတ်. ကို…
ကိုယ်တိုင်.. ပြင်ဆင်ဖို့ပါ ။
ကိုယ့်ကို..လိမ်ညာနေပြီမှန်း….မသိနိုင်တဲ့ညံ့ဖျင်းမှုကို..ကျော်ဖြတ်ရမယ် ။
ကိုယ့်ကို… လိမ်ညာနေပြ၊ီမှန်း..သိသိကြီးနဲ့ လည်း….. ညံ့ဖျင်းတွေဝေစွာ…. အလိမ်ခံတတ်တဲ့အားနာစိတ်တွေကို…. ပြင်ဆင်ရမှာပါ ။
အမှန်တရား..မဟုတ်ပဲ..မှားနေတဲ့ …ကိစ္စတွေကို…တွေ့ ရတဲ့ အခါ……
ပြတ်ပြတ်သားသား….ဖြေရှင်းတတ်ဖို့ ….. ( အားနာတဲ့ စိတ်ကို..ဖျောက်ဖျက်ဖို့ … )
23 .2. 2013
20း50 pm .
(ကျိုက်က္ကလော့ ဘုရားရင်ပြင် )
ကျုပ်ခြေလက်တွေက အင်မတန်မှ သန်မာလှပြီး ဆင်ပြောင်ငါးစီး အားမာန်ကြီးတဲ့
ခံဒါကိုယ်ကြီးလည်း ရှိပါ၏… သို့ပေမယ့် အရက်သောက်ဖို့ အခြားမဟုက်က ဟုက်ကလုပ်ဖို့
ပိုက်ဆံမရှိလို့ပါဗျာ…. အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် (အားနာတတ်မယ်ဆိုရင်) ကျုပ်ကို အသုံးစရိတ်လေး
ဒီထက်မက အားနာတတ်မယ်ဆိုရင်ဒေါ့ဖြင့် ကျုပ်ကို ကြိုက်မယ့်လူမရှိလို့
ကဂျီင်္းကနေ အ အထိ စာစဉ်တွေရေးနိုင်တဲ့ အတွေးခေါ်လေးကို ( အမှန် အတွေးခေါ်ကြီးပါ )
ဘကြီး မနက်ဖြန်သွားတော့မယ် ( ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ဘီ )
ဦးစံကျော် ဒီလကျောင်းမှာ ဘာကြေးညာကြေးတွေပေးရမယ် အိမ်မှာတောင်းတာများတော့ မတောင်းခြင်တော့ဘူး
သနားတတ်တာတော့မပြောလိုပါဘူး။ အားနာတတ်တာတော့ သိပ်မကြိုက်ဘူး။
လူကြီးတွေပြောသလိုဆို ဒီလောက်အားနာပုံမျိုးနဲ့ မိန်းကလေးဖြစ်ရင် အဟွာပေါ်က ဆင်းရမှာ မဟုတ်ဆိုလား။
အားမနာတတ်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် နည်းတွေရှိပါတယ်။ အမြန်ဆက်သွယ်ပါ။
အားနာလို့လဲ တစ်ခါတစ်လေ လိုက်လျောမိတယ်
အ လို့လဲ တစ်ခါတစ်လေ ခံရတတ်တယ်
အ ပြန်ရင်လဲ တစ်ခါတစ်လေ ကောင်းသွားပြန်ရော
အလွန် အားနာတတ်သော ဦးမာဃပါကွယ် (မှတ်ချက်- မိန်းကလေးများသာ )
အားနာတယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ လူတော်တော်များများဆီမှာ ကူးစက်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတစ်ကောင်လိုပါပဲ။ အဲဒီပိုး ကိုယ့်ဆီမှာရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး လူတွေနဲ့ကင်းနေအောင်ရှောင်နေတော့ အလင်းဆက်ရေ…။ ကြုံတုန်းလေး အကြံပေးတာ……ဟီး။
အားနာလို့ လိမ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ကိုယ်က အလိမ်ခံလိုက်ပေမဲ့
လိမ်တဲ့သူက အချဉ်တစ်ကောင်တော့မိပြီ လို့တွေးနေမှာ..
ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ် အချဉ်လို့ပြောခံရတာ စဉ်းစားကြည့်ပါအုံး….
အလင်းဆက်ရေ … အဲ့ဒီ အားနာတာတတ်တာက သူတပါး အလိမ်ခံရဖို့တထစ်လျော့ အညံ့ခံပေးလိုက်သလို ပါပဲ .. အားနာသင့်တဲ့ နေရာမှာပဲ အားနာသင့်ကြောင်းကို .. အားနာစိတ်ကိုစော်ကားခံရတဲ့အချိန် … ပိုနားလည်တတ်လာပါတယ် ။ တောင်းစားတဲ့ လူတွေကလည်း နည်းမျိုးစုံနဲ့ တောင်းစားကြပါတယ် ။ ပေးတဲ့ လူတွေကလည်းပေး ၊ တောင်းတဲ့ လူတွေကလည်း တောင်း …. မုန့်လုံးကို စက္ကူကပ်နေတာ .. ခိခိ … ဂျိပေဂျိ .. ဂျိပေဂျိ …
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်မနေ့ညကတင် … လှည်းတန်းဘက်မှာ တယောက်တည်း သွားကြိတ်နေတုန်း ကလေးတစု စပါးတွဲလား ဘာတွဲလား လာရောင်းတယ် … တဂျီဂျီနဲ့ သွားပါပြောနေတာ ပေတိပေကပ်နဲ့ မသွားဘူးလေ … ။ ဒေါကွီးခါနီးမှ .. လစ်သွားကြတယ် … လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ … မိဘတွေပါ တွေ့သေးတယ် .. မိသားစုလိုက် လိုက်တောင်းနေကြတာကိုး ..။
လောင်းလောင်း အဂိုးကလေ … ဖတ်ခဲ့ရဖူးတဲ့ …
ထောင်ကထွက်လာပြီး … လူမိုက်ဂိုက်ဖမ်းလို့ ..ကား ခမရှိလို့ ဆိုပြီး လာတောင်းခဲ့တဲ့ လူကို … ရွာထဲက ဟိုဘုကလန့် ဂွစာ လူဂျီး သူ့တက်တူးတွေ ပြပြီး ဆဲလွှတ်လိုက်သလိုမျိုး … လုပ်ခဲ့သင့်တာ… ခွိခွိ ။ :harr:
မှတ်မှတ်ရရ ကြားဖူးတာ ..
ဘုရင့်နော်ဈေးနားမှာ တောင်းစားတဲ့သူ တယောက်ရှိတယ်တဲ့
ညဘက်ဆို သူက လှိုင်သာယာကို ဆိုင်ကယ်နဲ့ ပြန်တယ်တဲ့
အဲ့ဘက်မှာကျ သူက ဈေးသမားတွေကို နေ့ပြန်တိုးနဲ့ ငွေချေးစားတယ်တဲ့
တောက်စ် … ပြန်ရောက်တုန်း သွားမတွေ့လိုက်ရတာ နာသကွယ်
အိုဘဲ့ ဘစ်ဇိနပ် မန်းကိုး ..
ကိုရင် အလင်းဆက်ရေ .. ကကြီးကနေ အအထိ ဆုံးခန်းတိုင်သွားပီပေါ့။
ရေးနိူင် တွေးနိူင် ကြိုးစားအားထုတ်နေတာကို အများကြီးလေးစားပါတယ်ဗျာ …
“ဘီလူးခေါင်းလေးနဲ့ beggar လေး”
ဘီလူးခေါင်းလေးနဲ့ ချစ်သူလေး ‘မ’ ရေ
ငါတော့ ပေးမိတာ မှားပြီ….
တခြားဟာ..တောင်းရင် ပေးတယ်ဗျာ ။
ရည်းစားတော့ လာမတောင်းနဲ့။ ပေးဘူး……။
ဟုတ်တယ်ဗျို့ .. အားနာလို့ လိုက်လျောတိုင်း…
အ တယ်..လို့အထင်ခံလိုက်ရတာက ချက်ချင်း ရတဲ့ ..ရလဒ်…
က = ကနေ…အ = အထိ.ချီတက်လာတာမှာ..
အားတင်းကာ တင်းကာနဲ့ဆန့်ငင်ဆန့်ငင် ချီင်္တက်လာရပါတယ် ။
အားတွေ..ပြန် တက်လာရပါတယ် ။
အဆက်မပြတ် ခံစား.အားပေး ဖတ်ရှု လာကြတဲ့မိတ်ဆွေကြီးများ..ပေးတဲ့အားအင်နဲ့ 
နောက်ထပ်… အဆက် အတွဲကြီးတစ်ခု… ထပ် ဖန်တီးနိုင်ဖို့ …
အားပေး.ခံစား လာတဲ့ 
အလင်းဆက်…ရဲ့နောက်ထပ်ရေးလာမယ့်…
အခု အက္ခရာများနဲ့ခရီးသွားခြင်းလို …
အဟက်…အဟက်…( ရယ်နည်း..အသစ် သုံးထားပါသည် ။ ယခင် သုံးသော..အဟိကို ယခု မသုံးတော့ပါ)
( ဖတ်ရှု ခံစားပေးလို့ …ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အူးမာဂ ရယ်..။ )
ကျွန်တော်လည်း..လူတွေနဲ့ ဝေးးးဝေးတဲ့ နယ်မြေ…..
အားနာတတ်တဲ့ မိန်းမချောလေးတစ်ယောက်နဲ့ ..အတူသွားရရင်…ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ..ဗျာ.။
အားပေး.ခံစားလို့ .ကျေးဇူးဗျ ။
အဲဒလို ပြန်တွေးတော့လည်း… ဟုတ်တယ် ။
ကျွန်တော်… ရေးထားတဲ့ အတိုင်း..
ကိုယ် ကိုယ်တိုင် ပြန်ပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်ပေါ့ ။
အားနာတာပါပဲ ။ စားနေတဲ့ အစာေးတာင် မျိုမကျတာလေ။
အမှန်တော့.. စားသောက်ဆိုင်တိုင်းမှာ.. တောင်းတဲ့ သူတွေ..မ၀င်နိုင်အောင်..
အဟန့်အတားလေးတွေ ရှိရင် ပိုကောင်းမှာပေါ့နော် ။
မြေနီကုန်းက…ကင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာဆို..ည ဘက်တောင်..
သီလရှင်သေးသေးလေးတွေက စားနေသူတွေကြား.လိုက်တောင်းနေတာ ။
မအိတုန်တွေ့ ခဲ့တဲ့ ..စပါးတွဲရောင်းသူတွေနဲ့တူမလားပဲ..
ကျွန်တော်လည်း..အဲဒီလို မိသားတစ်စု တွေ့ နေကျပဲ ။
စုတ်ပြတ်နေတဲ့ အ၀တ်အစားတွေနဲ့ ..လေ ။
ပြီးတော့…အမေလုပ်သူ ထင်တယ် ။ အသက်ကြီးကြီးမိန်းမကြီးက…
တော်တော် နေမကောင်းဖြစ်နေပုံနဲ့ ..
၀တ်ထားတဲ့ …အ၀တ်အစားကလည်း..လုံးဝ မမြင်ရက်လောက်အောင်..
တွေ့ တဲ့ သူတိုင်းး ရင်ဆို့ သွားစေတဲ့ပုံစံနဲ့ ..လိုက်ရောင်းနေတာ ။
အသုံးမလိုလို့ …မ၀ယ်ပါဘူးဆိုတဲ့ လူတောင်..၀ယ်ပြီး..လွှင့်ပစ်ဖို့ တေယ့ ၀ယ်မှာပဲ ။
ကျွန်တော်လည်း..အဲဒီမိသားစုကိ်ုတွေ့ တိုင်း..ငိုချင်လောက်အောင်ပဲ ။
ကိုယ် ကိုက… အားနာတတ်နေတော့…..
အဟီး .. အလင်းဆက်ရေ … ရုပ်ဝါဒီ နိမ့်ကျတာမြင်တိုင်း အစကတော့ သနားမိပါတယ် … ။ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ ဘာညာ ဘာညာပေ့ါလေ .. နောက်ပိုင်းကြတော့ … ပြန်တွေးကြည့်ရင်း .. ငါသနားတဲ့ လူတွေက ငါ့တနေ့ဝင်ထက်တောင် စိတ်သောက မရောက်ပဲ ရှာနိုင်ကြတယ်လို့ တွေးပြီး .. တူညားကို မသနားဒေါ့ဝူးးးးးးးးး ကိုယ့်ဘာသာပဲ သနားတော့တယ် …… ။
ဒါကြောင့် အိမ်ကထွက်လာကတည်းက အချောင်ခိုရေး .. တို့အရေးလို့ သက်စေ့ရွတ်ပြီးမှ ထွက်လာခဲ့တယ် … ခိခိ
နောက်ထက်… လာမှာတွေက..ရှိသေးတယ် .။
အားနာတယ်ဆိုတာ မြန်မာမှာပဲ ရှိမယ်ထင်ပါတယ် … တခြားဘာသာစကားနဲ့ ပြောကြည့်တိုင်း အားနာလိုက်တာဆိုတဲ့ စကားလုံး ရှာမတွေ့ဖြစ်မိတယ် … သူငယ်ချင်းနဲ့ chatting လုပ်ရင်တောင်မှ အင်္ဂလိပ်လိုရိုက်ရင်းကနေ အားနာလို့ပါဆိုတဲ့ စကားလုံးရိုက်ဖို့ လိုအပ်လာတိုင်း arr nar ဆိုပြီး ဒီအတိုင်းပဲ ရိုက်လိုက်ရလေ့ရှိတယ် ..
don’t say arr nar tal …
အားနာတယ်ဆိုတာကို များသောအားဖြင့် ဆင်တူယိုးမှားအနေနဲ့Hesitate လိုသုံးပါတယ်..
verb – pause in indecision – be reluctant to do something
Please, do not hesitate… လို့ သုံးပါတယ်……
အားနာတယ်ဆိုတာ တခြား နိုင်ငံတွေမှာလည်းရှိပါတယ်…..
Professional နဲ့Personal…
Rights နဲ့Abuse
အဲ့ဒါတွေကို ပိုခွဲတက်လို့ သာ မထင်ရတာပါ….
ဒါပေမယ့် အခုအချိန်အထိတော့ အဲ့အားနာတယ်ဆိုတဲ့စာသားကို အင်္ဂလိပ်စာမှာလည်း သုံးနေဆဲပါ….
အီးပါတဲ့အကြောင်း ရေးရမှာကွ.. ရွံတတ်ရင် အီးမပါနဲ့ကွာ…
အစိုးရအစစ်ရဲ့ မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေထဲက တစ်ခုပါ..။
အစိုးရအစစ်ဆိုတာက မိမိစီမံရတဲ့လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ ရာနှုံးပြည့်တာဝန်ရှိလို့ပါ..။
(စောင့်ရင်းနဲ့ အသက်လဲ ငါးဆယ်နီးပြီဖြစ်ပါကြောင်း)
လူ့လောကကြီးထဲက နေ့စဉ်အဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာ အားနာလို့ဆိုပြီး
ဝိုးးးးးးးးးးး အံ့သြစရာပဲ ဒီလိုလိမ်ညာဟန်ဆောင်
ဟုတ်တယ်နော် ။ အားနာလို့လိုက်လျောတာတွေက…တစ်ခါတစ်ခါ အလွန်အကျွံ ဖြစ်ဖြစ်သွားလို့ ..
မနည်း ထိန်းနေရတယ် ။
ဟိုလူကြီး ( အပြုသဘောဆောင်တယ်.ဆိုတဲ့ လူကြီး )ကိုတောင်.. အားနာပြီး… သူတောင်း ထားတဲ့ ဟာပေးမိတော့မလို့ …
ဒါပေမယ့်..ဒီ ကိစ္စကတော့….အားနာရမယ့်ကိစ္စ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ..သိနေတယ် ။
ဖတ်ရှု ခံစားပေးလို့ ..ကျေးကျေးပါဗျ ။
စကားလုံးလေးတစ်လုံး.. သိမှတ်လိုက်ရလို့ ..ကျေးဇူး …။
ကျွန်တော်လည်း.. အားနာတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကို..
အင်္ဂလိပ် လို..မသိသေးဘူးလေ. ။
အ = အူးကြောင်…အီးပါခြင်းအကြောင်း..
ရေးရမှာနော်. ။ အူးကြောင်ဆီက ပုံတွေ .တောင်းပြီး
တိုင်းပြည့် ရှေ ရေ့းကို…
တကယ် ကို ရှိနေတယ်..
မယုံ မရှိနဲ့ ဗျ…။
ဒီ့ထက်ဆိုးတာတွေက..ပြောလို့သိပ်မကောင်းတော့……
တခါက လမ်းသွားရင်းနဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက် ဆွဲခြင်းကလေးနဲ့ အနားကပ်လာတယ်။
ဆေးရုံက ဆင်းလာတာ ပြန်စရာလမ်းစရိတ်မရှိလို့ လူတိုင်းလည်း မတောင်းရဲဘူး။
လိမ်ပြီး တောင်းတာလား အမှန်တကယ်လား မသိပေမယ့်….
အမျိုးသမီးချင်းမို့ ဆိုတဲ့စကားကို မလွန်ဆန်နိုင်တာနဲ့ပဲ ပေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ :buu:
ဦးကျောက်လည်း ချွတ်တားလေးတစ်ကောင်လိမ်သွားတာ ခံရဘူးသဗျ…
အနှီငတိလေးက ညဦးပိုင်းလောက်ဆို အလုံလမ်းကုန်းတက်မှာ အချဉ်ရှာပါတယ်…
လူကြည့်တော့ ၇နှစ် ၈နှစ်၊ အတတ်ကောင်းကတတ်နေပြီ…
ဦးကျောက်လည်း ခလေးကိုဆုံးမစကား သွားပြောလိုက်တာ…
သကောင့်သားက ဝေဒနာတွေကြေငြာလိုက်လို့ နောက် ၅၀၀ အဆစ်ထွက်သွားတယ်…
စကားမစပ် အားနာတာကို ယိုးဒယားလိုတော့ “ခရမ်ကြိုင်” လို့ခေါ်သဗျ…
ကျနော်ကလည်း လွှတ်အားနာတတ်တာဗျ၊ ငယ်ငယ်က စိတ်ဆိုးလို့ ဆန္ဒပြတဲ့အနေနဲ့ ထမင်းမစားပဲနေတာတောင် သူတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာဆိုးလို့ ဘာမှမဖြစ်သလို လုပ်လုပ်ပြရသေး၊ တခုခုကို ငြင်းကို မငြင်းချင်တာ၊ အခုတော့ အလုပ်သဘော အရ မငြင်းချင်လဲ မဖြစ်သာလို့ အားနာနာနဲ့ မျက်စိမှိတ် ငြင်းနေရတယ်၊ လာတောင်းတဲ့သူတွေလဲ တတ်နိုင်သမျှ မထည့်ပဲနေနိုင်အောင် ကြိုးစားတယ် သန်သန်မာမာ အကောင်းကြီးဆိုရင်ပေါ့။ ကလေးတွေ တောင်းနေရင် တသက်လုံးအကျင့်ပါ မဆိုးလို့ မပေးဘူး။ ပြီးတော့ စာမေးပွဲခန်းမှာ စာခိုးချနေတာ အားနာလို့ သနားလို့ မဖမ်းလို့ မှ မရတာ၊ သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ပါ ။အဲဒါကြောင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ် စည်းကမ်းလုပ်ထားရတယ် မပေးဘူးဆိုမပေးဘူး၊ ဘာမှမပေးဘူး၊
ကကြီး ကနေ အ အထိ
အလင်းဆက် ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်က
အက္ခရာတွေစဉ်လို့ ရေးသွားတယ် …
အခု အ ဆိုတော့ အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီပေါ့နော့ …
ဒါ့ထက် အားနာတယ် ဆိုတာ မြန်မာ အများစုမှာ ရှိတတ်ကြမယ် ထင်ပါတယ် ..
ကျုပ်မှာလည်း ရှိတယ် …
အဲ့ဒီလို အားနာလို့မို့ ခံခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်တွေလည်း မနည်းတော့ဘူး …
ဒါတောင် လူက မမှတ်ချင်သေးဘူး …
ဖြစ်ချင်တာက လူလည် လူဝယ်ကြီးတစ်ယောက် …
ဖြစ်နေတာက လူတုံး လူအ တစ်ယောက် …
ဘယ်လောက်များ မုန်းဖို့ ကောင်းလိုက်သလဲ …
ဖတ်ရှု ခံစားပြီး..ကျွန်တော့်ကို..အားပေးကြတဲ့ချစ်သော..